Dibedbaxayaasha Itoobiya oo Maraykanka xusuusiyey jab Muqdisho ku gaarey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dibedbaxayaasha Itoobiya oo Maraykanka xusuusiyey jab Muqdisho ku gaarey!
Dibedbaxayaasha Itoobiya oo Maraykanka xusuusiyey jab Muqdisho ku gaarey!
(Washington, DC) 22 Nof 2021 – Boqollaal dibadbexe oo Itoobiyaan iyo Eritrean ah ayaa iskugu soo baxay albaabka Aqalka Cad ee Washington, DC, iyagoo ku qaylinaya ”Maraykanow faraha kala bax Itoobiya iyo dib nooga bax.”
Dadkan ayaa sidoo kale taageerayey aragtida DF Itoobiya ee diidaysa sida uu Maraykanku u wajahayo dagaalka siyaasadeed ee haatan ka holcaya dalkaasi oo ay ku eedeeyeen inay si cad cad ugu hiillinayaan fallaagada TPLF.
Dadkan ayaa sitey boorar ay ku dhignaayeen halkudhegyo kala geddisan iyagoo sidoo kale dhaliilay cunaqabataynta ay DF saartay dalka deriska ah ee Eritrea, taasoo ay ku sheegeen mid loogu gogol xaarayo TPLF.
Yeelkeede, waxaa sawirrada ay siteen ka mid ahaa mid muujinaya jab Maraykanka ku gaarey magaalada Muqdisho oo lagu laayey askar Maraykan ah isla markaana dayuurado looga ridey.
Dagaalkaasi oo dhacay 3dii Oktoobar 1993-kii islamarkaana duuliye looga qabsaday Maraykanka, ayaa laga sameeyey film caan ah oo la yiraahdo Black Hawk Down.
Dibedbaxayaasha ayaa watey sawirka film-kaasi oo ay sheegeen in qaybtiisa 2-aad uu Itoobiya ka dhacayo.
Previous article”Faraha ka qaada Itoobiya!” – Dadkii ugu badnaa oo ku bannaanbaxay iridda Aqalka Cad + Muuqaal & Sawirro
Next articleMaxay tahay danta uu Shiinuhu ku ilaashanayo dalka Somalia (QM oo uu olole ka wado)